The Blackout (2019) | MM Movie Store
တဈနရေ့ရှားနိုငျငံမှာ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိတဲ့ အခွအေနတေဈခုကွောငျ့ ဆကျသှယျရေးလိုငျးတှေ ပွတျတောကျသှားတဲ့အပွငျ မွို့တှအေမှောငျကကြုနျတယျ လူတဈခြို့ဟာလဲ ဘာကွောငျ့မှနျးမသိ အသိစိတျတှပြေောကျကုနျပွီး တိုကျခိုကျမှုတှေ လုပျတော့တယျ
သူတို့နောကျက ကွိုးကိုငျထားသူဟာလညျး ဘယျသူဆိုတာ အဖွရှောလို့မရပွနျဘူး အမှောငျကသြှားတဲ့ ဧရိယာအတှငျးကို စုံစမျးဖို့ လှတျလိုကျတဲ့အဖှဲ့တိုငျးလဲ ပွနျမလာနိုငျကွဘဲ အဆကျအသှယျတှပွေတျတောကျကုနျတယျ
ဒီတော့ ရုရှားအစိုးရဟာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာ စုံစမျးဖို့ အထူးတပျဖှဲ့တှဖှေဲ့စညျးပွီး အတှငျးပိုငျးထဲထိသှားပွီး စုံစမျးဖို့ စတငျတော့တယျ အထူးတပျဖှဲ့တှလေညျး ကူညီရာမဲ့ဖွဈပွီးအထဲမှာ ပိတျမိနတေော့တယျ
တဈဖကျမှာလညျး အဈလို့ အမညျရတဲ့ ဂွိုလျသားတဈကောငျဟာ အမညျဖျောမရတဲ့ရနျသူကို ရှာဖှဖေို့ သူကူညီနိုငျတယျဆိုပွီး လူသားတှကေို သူ့ကို ကူညီဖို့ ကမျးလှမျးလာခဲ့တယျ … တကယျတော့ ဂွိုဟျသားတှဟော ကမ်ဘာပျေါကို အခွခေနြထေိုငျဖို့ ကွိုးစားနတောသိလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ……
အထူးတပျဖှဲ့တှအေနနေဲ့ရော အပွငျကို ပွနျထှကျလာနိုငျပါ့မလား…. အသိစိတျမဲ့သှားတဲ့လူတှကေို ထိနျးခြုပျနတောကရော ဘယျသူလဲ… ဒီပွဿနာကွီးကိုရော သူတို့ဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလား…….
ထူးထူးဆနျးဆနျးနဲ့ သိပ်ပံဆနျဆနျဇာတျလမျးကွိုကျသူတှအေတှကျ သဘောတှစေ့နေိုငျမယျ့ ဇာတျကားလေးပါ ဇာတျလမျးပွီးသှားသညျအထိ အတှေးတှနေဲ့ကနျြခဲ့မယျဇာတျကားလေးပါ
တစ်နေ့ရရှားနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေ ပြတ်တောက်သွားတဲ့အပြင် မြို့တွေအမှောင်ကျကုန်တယ် လူတစ်ချို့ဟာလဲ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အသိစိတ်တွေပျောက်ကုန်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်တော့တယ်
သူတို့နောက်က ကြိုးကိုင်ထားသူဟာလည်း ဘယ်သူဆိုတာ အဖြေရှာလို့မရပြန်ဘူး အမှောင်ကျသွားတဲ့ ဧရိယာအတွင်းကို စုံစမ်းဖို့ လွှတ်လိုက်တဲ့အဖွဲ့တိုင်းလဲ ပြန်မလာနိုင်ကြဘဲ အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်ကုန်တယ်
ဒီတော့ ရုရှားအစိုးရဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ စုံစမ်းဖို့ အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီး အတွင်းပိုင်းထဲထိသွားပြီး စုံစမ်းဖို့ စတင်တော့တယ် အထူးတပ်ဖွဲ့တွေလည်း ကူညီရာမဲ့ဖြစ်ပြီးအထဲမှာ ပိတ်မိနေတော့တယ်
တစ်ဖက်မှာလည်း အစ်လို့ အမည်ရတဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ကောင်ဟာ အမည်ဖော်မရတဲ့ရန်သူကို ရှာဖွေဖို့ သူကူညီနိုင်တယ်ဆိုပြီး လူသားတွေကို သူ့ကို ကူညီဖို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့တယ် … တကယ်တော့ ဂြိုဟ်သားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကို အခြေချနေထိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ……
အထူးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရော အပြင်ကို ပြန်ထွက်လာနိုင်ပါ့မလား…. အသိစိတ်မဲ့သွားတဲ့လူတွေကို ထိန်းချုပ်နေတာကရော ဘယ်သူလဲ… ဒီပြဿနာကြီးကိုရော သူတို့ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား…….
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ သိပ္ပံဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေအတွက် သဘောတွေ့စေနိုင်မယ့် ဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းပြီးသွားသည်အထိ အတွေးတွေနဲ့ကျန်ခဲ့မယ်ဇာတ်ကားလေးပါ
4bia (Phobia) (2008)